४५० कर्मचारी खटाइदै - Pradesh Today ४५० कर्मचारी खटाइदै - Pradesh Today
कार्तिक २५, २०७६ सपना बोहरा
उपनिर्वाचनमा दाङ …
घोराही, २५ कार्तिक । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि ४ सय ५० जना कर्मचारी खटिने भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, सहयोगी गरेर ४ सय ५० कर्मचारी खटिने भएका हुन् ।
जिल्लाका दुई निर्वाचन स्थानका ३४ निर्वाचन स्थललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारीहरू खटाईने मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताएका छन् । जिल्लामा एक प्रदेशसभा सदस्य र एक वडा अध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
जसका लागि दुई स्थानमा ३४ मतदान स्थल र ४२ मतदान केन्द्रहरू तोकिएको छ । ति केन्द्रहरूमा कर्मचारी खटाईने तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरिएको उनले बताए । आगामी मंसिर १४ गते हुने निर्वाचनको लागि तयारी तिव्र पारिएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् ।
कसैले पनि उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता फिर्ता लिएका छैनन् भने कसैले दाबी विरोध पनि गरेका छैनन् । कार्तिक २१ गते गरिएको मनोनयन दर्तामा कुनै पनि उम्मेदवारहरूले उमेदवार फिर्ता नलिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले बताए ।
‘हिजोसम्म उम्मेदवारहरूले मनोनयन फिर्ता लिने, दाबी बिरोध गर्ने समय थियो’ मूख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले भने ‘कसैले पनि फिर्ता लिनुभएको छैन ।’ उम्मेदवारहरूको निर्वाचन चिन्ह आज प्रदान गरिने पनि उनले जानकारी गराए ।
सबै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिने तयारी भईरहेको पनि उनले बताए । कार्तिक २१ गते नै मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरू चुनावी माहोल तताईरहेका छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो पक्षमा मत तान्नको लागि चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
यहाँ दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा पार्टीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दाङमा हुन लागेको दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाले बर्चस्व कायम गरेको थियो भने त्यो बर्चस्व कायम गर्नको लागि आफनो प्रचारप्रस्चार तिव्र पारेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले आफ्नो गुमेको साँखलाई जोगाउनको लागि कडा परीक्षा गरिरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) मा प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ भने निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२)मा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ को वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुँदैछ । घोराही उपमहानगरमा भने अझै नेकपाले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने नेपाली काँग्रेसले ताराबहादुर डिसीलाई उम्मेदवार बनाउने टुङ्गो लागि लगाईसकेको छ ।
दाङका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्थासमेत कडा पारिएको छ । दाङको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य क्षेत्रसमेत तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन् । ति क्षेत्रहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन समेत गरिसकेको उनले बताए ।
उपनिर्वाचनको चहलपहल बढेसँगै सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत समितिले ध्यान दिन थालेको छ । निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको बर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएको जिल्ला सुरक्षा समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिएका छन् ।
उपनिर्वाचनमा स्थानीय सुरक्षा समितिले निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख)को छवटा निर्वाचन स्थल अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखेको छ । मंसिर १४ गते जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२)मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
जिल्लाका यी दुईवटा क्षेत्रको निर्वाचनमा ३४ वटा निर्वाचन स्थलहरू रहेका छन् । त्यसमध्येका प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने छवटा निर्वाचन स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ ।
यातायातको राम्रो पहुँच नभएका, सञ्चार माध्यमको राम्रो पहुँच नभएका, भौगोलिक कठिनाई रहेका तथा सघन जनसंख्या भएको र विगतको निर्वाचनमा भएका घटनाका आधारमा ती क्षेत्रलाई स्थानीय सुरक्षा समितिले अतिसंवेदनशील क्षेत्रको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले ती स्थानहरूको अनुगमन गर्नुको साथै सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने प्रक्रिया सुरू भइसकेको जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनले प्रमुख सुरक्षा थ्रेटका रूपमा सरकारद्वारा प्रतिवन्धित नेत्र विक्रमचन्द (विप्लव) समूहलाई लिएको छ ।
उम्मेदवारी दर्तासँगै निर्वाचनको चहलपहल बढेको भएपनि स्थानीय प्रशासनले त्यसपूर्व नै सुरक्षा रणनीति र सुरक्षाकर्मी परिचालनको रणनीति निर्माण गरेर काम सुरू गरेको प्रजिअ रिजालले जानकारी दिए । उनले निर्वाचनमा तीनतहको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना अन्तिम घेरामा रहेर निर्वाचनको सुरक्षा गर्ने गरी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाईएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए । निर्वाचन अवधिभर पार्टीका कार्यालयहरू, उम्मेदवारको घर,
उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारको सम्पर्क कार्यालयहरू, उनीहरूका प्रचार अभियान सञ्चालन हुने ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार र मागको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जिल्ला सुरक्षा समिति संयोजक रिजालले जानकारी दिए । उनले आवश्यकता महसुश भएको खण्डमा निर्वाचनका लागि बाहिरी जिल्लाबाट समेत सहयोगका लागि सुरक्षाकर्मी माग हुने बताए ।
मगर संघको बैठक
विपद्को साथी ‘हातेमाइक’
धन–पैसाको लगानी, नोकरमा जवानी